Alisson ma ahan oo kaliya Goolhayaha ugu fiican Premier League ee sidoo kale isagaa ka ATOORE ah Yurub oo dhan….(EEG Tiro-koobkan) – Gool FM
Alisson ma ahan oo kaliya Goolhayaha ugu fiican Premier League ee sidoo kale isagaa ka ATOORE ah Yurub oo dhan….(EEG Tiro-koobkan)
(Europe) 11 Jan 2019. Goolhayaha Liverpool ee Alisson ma ahan oo kaliya inuu yahay goolhayaha ugu shidan Premier League ee ku darso waa Boqorka Goolhayayaasha ee shanta horyaal ee ugu waa wayn Yurub ilaa iminka.
Laacibka reer Brazil ayaa sameeyay bad-baadada ugu badan shanta horyaal ee ugu waa wayn qaarada Yurub, sidoo kale waxaa ka dhashay goolasha ugu yar isku cel celis kulankiiba..
Alisson ayaa qaab ciyaareed aan innaba caadi ahayn ku jiray tan iyo sidii uu ugu soo biiray Liverpool suuqii xagaaga isagoo adduun dhan 67-milyan oo bound uga yimid Roma.
Tiro-koob dhawaan la soo saaray ayaa sheegaya in Goolyaha 34-kulan u saftay xulka Brazil uu u qalmo lacago kasta oo ay Reds ku soo iibsatay.
Waa goolyaha ilaa iminka bandhiga ugu fiican ka sameynaya Premier League iyo waliba Yurub.
Alisson ayaa sameeyay bad-baadada ugu badan goolhayayaasha Yurub ilaa iminka oo wuxuu sameeyay Rikoodh aan innaba caadi ahayn 84.2% waxaa sidoo kale ka dhashay goolasha ugu yar isku cel celis kulankiiba 0.47.
Haddaba EEG Liiska Goolhayayaasha ugu shidan ilaa iminka Yurub: